Manida ragga oo la keydiyo - BBC Somali
Manida ragga oo la keydiyo
Manida dhammaan 18 jirada ayey tahay in la keydiyo si dib loogu isticmaalo, maxa yeelay qataraha ku xiran aabayaasha weyn, sidaasi waxaa ku doodaya culimada cilmiga Biology-ga iyo daawada ee loo yaqaano bioethics.
Manida ayaa xumaata marka uu qofku weynaado, taasi oo keeni karta xanuuno ay ka mid yihiin Autism iyo kuwa kale oo maskaxda ku dhaca.
Dr Kevin Smith oo ka tirsan jaamacadda Abertay ayaa BBC-da u sheegay, inay tahay xaqiiq loo jeedo natiijada, ayn tahay in si dhab ah loo arko arrimaha da'da waalidnimada iyo saameynta ay ku leedahay caruurta jiilka soo socda.
Dhakhtarka ayaa xalka u arko in manida ragga la keydiyo, si marka ay weynaadaan loogu badalo tii markii ay yaraayeen.
Dhanka kale, Professor Adam Balen oo ah guddoomiyaha ururka taranka ee Britain ayaa ka horjeeda taa, isagoo yiri in habkan uu rasmi aheyn. Wuxuuna ka digay in midda la keydiyay ay ka liidato tan cusub.